बागलुुङ्गको बलेवा एयरपोर्टबाट उड्ने लाइट हेलिकप्टरमा कति लाग्छ भाडा? हेलिकप्टरको ट्याक्सी सुबिधा पनि ! | News Dabali
बागलुुङ्गको बलेवा एयरपोर्टबाट उड्ने लाइट हेलिकप्टरमा कति लाग्छ भाडा? हेलिकप्टरको ट्याक्सी सुबिधा पनि !
August 25, 2017 | 1:34 pm
नेपालमा हेलिकप्टर सेवा धेरैअघि देखि नै थियो।
ठट्यौली गरेर ‘बच्चा हेलिकप्टर’ भनिने ‘अल्ट्रा लाइट’ को सेवा पनि पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा केही वर्षदेखि उपलब्ध छ।
अब भने नेपालमा ‘अल्ट्रा लाइटको दाजु’ र ‘हेलिकप्टरको भाइ’ भन्न मिल्ने ‘लाइट हेलिकप्टर’को सेवा पनि सुरु भएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘लाइट हेलिकप्टर’को व्यावसायिक उडानका लागि अनुमति दिएपछि यो कस्तो हेलिकप्टर हो, यसले कस्तो सेवा दिन्छ, कति पैसा लाग्छ भन्ने चासो सुरु भएको छ।
प्राधिकरणबाट उडान अनुमति पाएको हेली एयर नेपालले भदौ तेस्रो साताबाट व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
हेली एयरले फ्रान्सबाट ल्याएका दुई वटा ‘जेरोकप्टर’ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु गर्नेछ।
अल्ट्रा लाइट र हेलिकप्टरभन्दा फरक विशेषता भएको यस्तो हेलीकप्टरको सेवा दक्षिण एसियामै पहिलो भएको सञ्चालक धर्मराज बर्तौलाले बताए।
पेट्रोलबाट चल्ने यो हेलिकप्टरले लगातार तीन घन्टा वा ८ सय किलोमिटर उडान गर्नसक्छ।
‘हावाहुरी र अँध्यारोमा पनि उडन सक्ने विशेषताका कारण नै यो हेलिकप्टर आपतकालिन उद्धार र यात्राको लागि बढी प्रचलनमा रहेको छ,’ उनले भने।
आपतकालिन अवस्थामा जहाँजस्तो ठाउँमा अवतरण गर्न सक्ने यो हेलिकप्टरको लागि उड्नको लागि भने ९० मिटरको खाली ठाउँ चाहिन्छ। तर सामान्य हावा लागेको स्थानमा भने यसलाई उक्त ठाउँ नचाहिने प्राइभेट पाइलट समेत रहेका लामिछानेले बताए।
हेली एयरको मुख्य उद्देश्य पोखरा तथा हिमालको दृष्यावलोकन गराउनु रहेको छ।
तर तत्कालको लागि हेली एयरको प्राथमिकतामा भने पोखराको दृष्यावलोकन र माउन्टेन उडान हो। थप दुई हेलिकप्टर अाएपछि भने यो कम्पनीले एयर ट्याक्सीको पनि सुविधा दिनेछ।
‘तत्कालको लागि साइट सिनको लागि सेवा दिन्छौं पछि हामी एउटा निश्चित एरिया निर्धारण गरेर दुई वटा हेलिकप्टर ल्याएर सेवा दिन्छौं अनि लाइट हेलिकप्टरलाई एयर ट्याक्सीमा रूपान्तरण गर्छौ’ लामिछानेले भने।
यी सबै भाडाहरु सुरुअाती रहेका र पछि यात्रुहरूको प्रतिक्रियासँगै पुनर्विचार हुँदै जाने सिइओ लामिछानेले जानकारी दिए। अन्य हेलिकप्टर टुरमा ९० मिनेटको समयमा २ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी लाग्छ। त्यस्तै अन्य चार्टरको फरक भाडा निर्धारण गर्ने गरिएको छ।सेतोपाटीबाट